မိုးတောင်က ပွေးပေါင်ကလို့ အရပ်ခေါ်ခေါ်တဲ့ အရေပြားရောဂါကို ဆေးစာနဲ့ Ringworm အပြင် Dermatophytosis; Dermatophytid; Tinea လို့လဲခေါ်တယ်။ ဆေးစာအခေါ်လွဲနေတာက Worm ဆိုပေမဲ့ သန်ကောင် မဟုတ်ဘူး။ Fungus (ဖန်းဂတ်စ်) မှို ဖြစ်တယ်။
Onychomycosis (Fingernail) လက်သည်းမှိုအတွက် Griseofulvin ဆေး
Onychomycosis (Toenail) ခြေသည်းမှိုအတွက် Griseofulvin ဆေး
Tinea Pedis အားကစားသမားခြေထောက်မှိုအတွက် Griseofulvin ဆေး
Tinea Barbae မိုတ်ဆိတ်မှိုအတွက် Griseofulvin ဆေး
Tinea Capitis ဦးရေခွံမှိုအတွက် Griseofulvin ဆေး
Tinea Corporis ကိုယ်ခန္ဓာမှိုအတွက် Griseofulvin ဆေး
Tinea Cruris ပေါင်ခြံမှိုအတွက် Griseofulvin ဆေး
Dermatophytosis ကလေးမှို Griseofulvin ဆေး
Terbinafine ဆေးက စားဆေး၊ လိမ်းဆေးလာတယ်။ Anibret Cream, Daskil Cream, Dermafine Cream, Exifine Cream, Fungotek Cream, Mecloma-T Cream, Mycofem Cream, Sebifin Cream, Tebina Cream, Tefdin Cream, Teraderm Cream, Terbee Cream, Terbest Cream, Terbicip Cream, Terbicrat Cream, Terbiderm Cream, Terbina Cream, Terbinyl Cream, Terbized Cream, Terbo Cream, Terfast Cream, Tinafine, Terbinid, Bifine, Derbina, Xtra, Befine, Mycoseal, Tyza Cream လိမ်းဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။
Toenail- 250 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ 12 weeks ၃ လသောက်ပါ။ အစာနဲ့ နီးနီး ဝေးဝေး ရတယ်။ လိမ်းဆေး Cream တနေ့ ၁-၂ ကြိမ်။ Fluconazole လူကြီး 50-400 mg daily ပေးရတယ်။ ကင်ဆာ၊ AIDS အေအိုင်ဒီအက်စ်၊ နှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်နဲ့ အသဲရောဂါ၊ အရက်စွဲရောဂါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ ကလေးနို့တိုက်ချိန်တွေမှာ သတိနဲ့ပေးမယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ခေါင်းကိုက်၊ ပျို့၊ ဗိုက်နာ၊ ဝမ်းပျက်၊ အစာမကျေ၊ ခေါင်းမူး။
လိမ်းဆေးကို ဖြစ်နေတဲ့နေရာတခုလုံးအပြင် ဘေး ၂ စင်တီမီတာအထိ တနေ့ ၁-၂ ကြိမ်။ အနည်းဆုံး ၂ ပတ်။
2. Fluconazole = 50-100 mg/d or 150 mg တပတ် ၁ ကြိမ်၊ ၂-၄ ပတ်။
3. Itraconazole = 100 mg/d ၂ ပတ်၊ (သို့) 200 mg/d ၁ ပတ်။
4. Terbinafine = 250 mg/d ၂ ပတ်။